Mhlawumbe ingenye yezindawo ezinhle kakhulu eRussia ubhekwa enhlonhlweni yaseCrimea. Kwaphela isikhathi esingaphezu konyaka, nguye ingxenye Russian Federation, futhi izakhamuzi eziningi ezweni lethu elinamandla bamagange usivakashele ukubona izinto, yebo, ukuphumula. Kukholakala ukuthi eCrimea ikakhulukazi ebukekayo ngo-September. Izibuyekezo zezivakashi abaye bavakashela esifundeni edolobheni solar ekwindla, afakazela lokho. Ngakho owasungulwa wakhiwa engcono ukuya? Lapho ukuphumula kuyinto okuzuzisa ngokwengeziwe?
Sevastopol - enhle emhlophe! City-hero enkazimulweni Russian! Mayelana naye sakhiwa lonke legend. Amashumi ezinkulungwane zabantu dream ukuza lapha okungenani kanye. Mangisho ukuthi Sevastopol ngempela umuzi azinake. Waziwa umlando alo ezempi, izikhumbuzo zomlando eziningi, ulwandle, lasolwandle, izindawo amahle olunothile, inhlanzeko spaciousness. Mhlawumbe, lo ngumuzi ukuvakashela ababehlose ukuhamba eCrimea ngo-September. Izibuyekezo afakazela lokho. Abaningi baphikisa ngokuthi ekwindla ka Sevastopol ekhetheke kakhulu. Umoya njengoba nemfudumalo njengoba ehlobo, kodwa ukushisa kakade uwela, futhi asikho isidingo ukufihla ihora rush ekhaya noma ehhotela ukusuka elangeni. lokushisa Amanzi nazo zazilokhu - 20-22 degrees ngezansi angawi, kwaze kwaba maphakathi Okthoba. Leli dolobha lapho kushisa zone evumayo kakhulu - kukhona cishe njalo afudumele, ngakho zezivakashi kulezi zindawo zombili ihlobo nobusika ukuza.
Romance ekwindla ka Sevastopol
Abantu abaningi bathenga izinkambo eCrimea Septhemba kwaba edolobheni-iqhawe. Kusuke kufanele kube njalo. Kumnandi ukuhamba ngezinyawo eduze ukuvakasha, ekuthandeni izikebhe ukuntanta futhi amaza okukhanya, izilungiselelo lesikhumbuzo abadumile kuya scuttled imikhumbi ilanga futhi ezindizayo ongaphakeme ngu seagull. Khona-ke ukukhuphuka kancane ephakeme kuleli bhuloho ezithandwa, lapho umbono ebabazekayo we ukuvakasha kanye ohlangothini olusenyakatho lwe-edolobheni, ofinyelelekayo ngumuntu njalo isikebhe Shuttle esilandelayo. Bese ukuya esikhumulweni semikhumbi sokhuni Ukubala ezidumile sika Quay, elitholakala Awukude chibi - eduze kwendawo Nakhimov. Khona-ke ukungcebeleka ngokusebenzisa amahlamvu segolide ugcwele epaki. Futhi yilokho nje edolobheni! Ungakwazi namanje vakashela eChersonese lasendulo - isiqeshana Greece e-enhle yedolobha iqhawe. Noma uthathe uhambo oluya Marseille Sevastopol - Balaklava, endaweni afuthwe ngesibulali umoya amatilosi iphunga izinhlanzi fresh, futhi kufanele anikele ezinye yokudlela ezinezihloko, ukujabulela unyakazisa phezu kwamagagasi, yezikebhe futhi bay olunothile. Ngokuvamile, kubalulekile ukuya Sevastopol, uma ufuna ukuvakashela eCrimea ngo-September. Izibuyekezo zezivakashi eziningi kuphela uqinisekise lesi seluleko.
Lokhu edolobheni elincane libalele elisogwini oluseningizimu ye yale nhlonhlo ubizwa kufanele wayekubheka njengelungelo gem. Abantu abaningi beze lapha, ngifuna ukubheka eCrimea ngo-September. Izibuyekezo abonisa ukuthi Yalta - wedolobhakazi ayibalulekile ezishibhile, kodwa amahle. Izihlahla zesundu Exotic, eziningi amathilomu, amahhotela nezindawo zokudlela, amapaki ethule, ezihlukahlukene izinkambo, flora amazing kanye nezilwane - konke lokhu ngenxa ukuwa lapha ukuchitha isikhathi hhayi kuphela ezithakazelisayo, kodwa futhi okuningi ukhululekile futhi kumnandi kunalokho ehlobo kushisa. Ukufika e-Big Yalta, kufanele nakanjani vakashela Nest the Swallow sika, Vorontsov futhi Livadia izigodlo, ekhuphukela Mount Ai-Petri, ubunyoninco ukubukwa amahle ngiyaphupha uhambo ifektri iwayini YaseCrimea "Massandra", okuyinto okungenye yezinkundla ezinkulu kunazo, endala futhi elalidume kunawo wonke kulo lonke emhlabeni! Ngaphandle kwalokho, uma sikhuluma ngaleli phuzu, izinga lokushisa kwamanzi eCrimea ngo-September, le Yalta linqoba - lapha ihlala efudumele isikhathi eside, kuze kube sekupheleni kuka-October.
Kuyinto isiphetho encane ezisemadolobheni endaweni Greater Yalta. Coming lapha kanye, Ngifuna ukuvakashela kule ndawo futhi. Autumn kukhona umoya langa fresh uphendulela izinongo AmaConifers, futhi izinga lokushisa kwamanzi kakhulu. Ngo eCrimea ngo-September ungakhululeka ngokugcwele. Ngaphezu kwalokho, kuleli qophelo amanani aphansi! Omunye amahle lonke nhlonhlo. Ukuze uhlale endlini enethezekile nabo bonke Izinsiza (ezifana ekhishini, egumbini lokugezela, kuvulandi yangasese, njll) imizuzu engu-10 ukuhamba ibanga ukusuka olwandle ingaba ruble 800-1000 nje ngosuku. Futhi lokhu ezimbili! Futhi imikhiqizo akuzona eqolo. Futhi, wonke ngaphakathi ukuhamba ibanga. Simeiz - idolobha elincane, ethule, ethule, ngakho-ke ilungele abantu abakhathele of umsindo befuna futhi nje ufuna ukuthatha umhlalaphansi endaweni ethile endaweni enhle eduze kolwandle.
Lona omunye lamadolobha amadala kakhulu kule nhlonhlo. It yasungulwa emuva ngo-530 BC. Ngakho ngokushesha ecacile - endaweni ekahle abathandi zokungcebeleka zomlando. Zingamashumi mass ngempela. Ngakho abantu abafuna ngamasiko ukukhanyiselwa eside kucatshangwa ukuthi lapho lonke eCrimea ngo-September. Ngaphezu kwalokho, kuba Kerch hits iyiphi isivakashi oye wanquma ukuhamba ngemoto noma ibhasi (kusukela enhlonhlweni ngale ndlela kuphela ukufinyelelwa ngokusebenzisa Kerch isikebhe). Futhi lokho kule ndawo kolwandle? Ngo eCrimea ngo-September ukuqedela (noma ukuvulwa) kwesizini ukubhukuda ungahlala noma ogwini oluseningizimu (Sevastopol, Simeiz, Yalta, Koreiz, Alushta, Alupka) noma Kerch. Isimo sezulu esipholile Continental, kancane eduze nakwezifudumele, ngakho Ubusika umnene, kanye nazo zonke ezinye izikhathi zonyaka - elifudumele, ihlobo ngisho sultry. Ngakho, kokunquma ukuya Kerch, akudingekile ukuba Thenga kakhulu izingubo ezifudumele - ngaphandle ukuthi sweatshirt engasindi kusihlwa.
Lokhu kubuye omunye lezo zindawo ukuthi idume eCrimea. Umkhakha wangasese (Septhemba iyathinteka), lapha ushibhile kuno ehlobo. Empeleni, akukho Fiolente emafulethini. yangasese kuphela. Lena ukuphela kwendawo lapho ungajabulela ubunjalo engonakalisiwe, ngokwezinga amagquma, ezilwandle ngamanzi emangalisayo ecacile. Akhiwe Fiolent eduze Sevastopol. Le piece zasendle kancane ezulwini yedolobha lanamuhla. Kuwufanele ngokuvakashela ekwindla uma ngenxa yokubuka ukwelenyoni enhle, okuyizinto akukho okubi kakhulu ukwedlula zokungcebeleka ezidumile ethandwa European kuphela.
Lapho akudingekile ukuya
ECrimea, yebo, yindawo enhle, kodwa-ke, futhi enhlonhlweni, kukhona izindawo lapho kungafanele ukuya. Ngokwesibonelo, Simferopol. Ake le nhloko-dolobha yesifunda, kodwa ukuze ujabule lo muzi asakhelwanga. Empeleni, ngenxa yezokuvakasha lapha, akekho ohambayo. Okungukuthi, iphuzu zokuthutha umphakathi - abantu bayo odlulayo imoto, ibhasi noma indawo esincike esikhumulweni sezindiza, bese uya endaweni yakhe yokuphumula. Ayikho Simferopol wonder okuthiwa omunye emadolobheni waseRussia angcoliswe kakhulu. Futhi nje, kule ndawo kukhona nje lutho ukubheka. Imizi nibaluleke zungeza ephathini, kanye eCrimea, futhi zihlanganisa eDzhankoy, Old eCrimea, Belogorsk, njll Ngokuvamile, Kungcono ukuya noma ukuba Kerch noma Southern Coast (SCC). Kube uyophumula ngokucacile ku inkazimulo benombono omuhle.
Kuphi Paris: izindawo ezithakazelisayo futhi zokungcebeleka
Vietnam, Nha Trang. Izibuyekezo mayelana ukuphumula ngoNovemba
Pelagia: Lisho ukuthini igama elithi liyazikhulumela
Kuyini inthanethi kanye okungaxhunyiwe
Izakhiwo abahlukile futhi enamandla imilingo itshe obsidian